Home Wararka Hirshabelle oo shaacisay qabashada doorashada 11 Kursi
Hirshabelle oo shaacisay qabashada doorashada 11 Kursi
Guddiga doorashooyinka Maamulka Hirshabeelle ayaa shaaciyay 11 kursi ee taalay Jowhar.
Xildhibaanada hadda ku fadhiya kuraasta ayaa kala ah.
1. HOP#005. Maxamed Cumar Ceymooy
2. HOP#024. Cabdulqaadir Caraboow
3. HOP#033. Yuusuf Ibrahim Afrax
4. HOP#052. Farxiyo Maxamud Dhaqane
5. HOP#070. Aadan Cali Xasan
6. HOP#088. Dahabo Suusow Maxamuud
7. HOP#097. Khadiijo mohamed Diiriye
8. HOP#098. Maxamud Maxamed Jimcaale
9. HOP#106. Muno Xasan Maxamed
10. HOP#115. Cali Maxamed Cumar
11. HOP#140. Cabdulqaadir Cosoble Cali
Magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale waxaa taalo iyana 11 Kursi oo aan wali la shaacin.
Previous articleGalmudug oo shaacisay qabashada doorashada 21 Kursi
Next articleXukuumadda oo wada qorshe dalka looga ceyrinayo Francisco Madeira iyo Sababta keentay
Maxaa ka soo baxay kulankii Axmad Karaash iyo Boqor Burhaan
Xassan Eelaay oo looga digay in uu noqdo aalad loo isticmaalo...